24 “Dɛn nti na ade nyinaa so Tumfoɔ no nhyɛɛ atemmu bere ntoo hɔ,+Na wɔn a wonim no nso nhuu ne nna?+ 2 Ebinom piapia ahye;+Wohwim mmoakuw, na wɔyɛn wɔn. 3 Wɔpam nnyanka mfurum;Wogye okunafo nantwi awowa.+ 4 Wopia ohiani fi kwan so;+Asase so mmɔborɔni nso de ne ho hintaw. 5 Hwɛ! Sɛnea sare so afurum+ nenam no,Saa na ofi adi kɔ ne nnwuma so kɔpɛ aduan.Na anhwea pradada so na onya aduan ma ne mmarimaa. 6 Mfuw mu na otwa mmoa aduan,Na nnebɔneyɛfo bobeturo mu na ɔfom nnɔbae ase. 7 Ɔde adagyaw na ɛda, onni ntama,+Na hwee nkata ne ho wɔ awɔw+ mu. 8 Mmepɔw so osutɔ kɛse fɔw no,Na guankɔbea a enni hɔ nti,+ ɔbotan ho na ɔfam. 9 Wohwim nnyanka fi nufu ano,+Na nea efura mmɔborɔni nso, wogye no awowa.+ 10 Ɔnenam adagyaw mu, onni ntama,Na ɔkɔm a ɛde no nti, ɔsoasoa mmɛtem a aka ase.+ 11 Abo ntam na ɔte awiabere;Otiatia nsã-kyi-amoa mu, nanso osukɔm de no.+ 12 Kurow no mu na wɔn a wɔrewu no si apini ma wɔte wɔ akyi hɔ,Na wɔn a wɔapirapira wɔn nso akra teɛm hwehwɛ mmoa;+Nanso Onyankopɔn de, ɛmfa no ho.+ 13 Abɔnefo atew atua atia hann;+Wɔanhu n’akwan,Na wɔantena n’atempɔn so. 14 Owudifo sɔre awiabere,Okum mmɔborɔni ne ohiani;+Na edu anadwo a, ɔdan ɔkorɔmfo.+ 15 Ɔwaresɛefo aniwa de,+ nea ɛtwɛn ara ne sɛ esum beduru anwummere,+Ɔka sɛ: ‘Aniwa biara renhu me!’+Na ɔde nkataanim kata n’anim. 16 Ɔkorɔmfo tutu nkurɔfo dan ase anadwo;Ɔto ne ho pon mu awiabere.Onhu hann da.+ 17 Anɔpa ayɛ sɛ sum kabii+ ama no,Efisɛ onim sɛ esum kabii mu ahude betumi aba mpofirim. 18 Nsu twe no kɔ ntɛmntɛm.Wɔbɛdome n’asase a ɔte so wɔ wiase.+Ɔrennan nkɔ bobeturo mu. 19 Ɔhyew ne ɔpɛ hwim sukyerɛmma nsu kɔ;Saa na Adamoa* yɛ wɔn a wɔyɛ bɔne!+ 20 Awotwaa werɛ befi no, na mmoawa betu agu no so adi ne nam,+Wɔrenkae no bio.+Na amumɔyɛ bebubu sɛ dua.+ 21 Obonin a ɔnwo mpo, ɔyɛ no basabasa,Na okunafo+ nso, ɔnyɛ no yiye. 22 Onyankopɔn de ne tumi bɛtwe ahoɔdenfo akɔ;Wɔbɛsɔre, na wonnim nea wɔn nkwa bɛyɛ. 23 Ɔbɛma wɔanya ahotoso+ na wɔahyɛ wɔn ho den;Na n’aniwa bɛhwɛ wɔn akwan.+ 24 Wodu nea ɛkorɔn, na ɛyɛ kakra pɛ, na wonni hɔ bio,+Wɔbɛbrɛ wɔn ase;+ wɔbɛpempan wɔn sɛnea wɔyɛ obiara no,Na wobetwa wɔn agu sɛ awi mmɛtem. 25 Enti hena na ɔbɛka sɛ meyɛ ɔtorofoAnaa ɔbɛka sɛ nea mereka yi yɛ nsɛnhunu?”